Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး33 MersinMESİAD - 'ရထားလမ်းစနစ်အားမက်ထရိုအစားမက်ဆီသို့အစားထိုးသင့်သည်'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
မီးရထားလမ်းမိုင်းအစား mesiad mersine မြေအောက်ရထား။
MESİADဥက္ကPresident္ဌ Hasan Engin ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန် Mersin မှာအချိန်မရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Hasan Engin ကပြောကြားခဲ့သည်။ Metro ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းသည် ပိုမို၍ ကုန်ကျမည်ဟုသမ္မတအင်ဂျင်နှင့် Mersin တို့၏ရထားလမ်းအဆင့်အလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုအချိန်တိုအတွင်းနှင့်သက်သာစွာကုစားသင့်သည်” ဟုသူကပြောသည်။
Mersin စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MESIAD) ဥက္ကChairman္ဌ Hasan Engin က Mersin ကဲ့သို့သောမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုအရေးပေါ်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတအင်ဂျင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ မြို့၏စီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အများပြည်သူ၏အဆိုပြုချက်များနှင့် Mersin အတွက်ဝေစုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သမ္မတအင်ဂျင်ကဒေသခံအာဏာပိုင်များနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုချက်ချင်းအရေးယူရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ METRO MERSIN သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်မသင့်တော်ပါ”
Mersin Metro အတွက်ကြေငြာခဲ့သော MESIAD သမ္မတ Hasan Engin က Mersin ရှိ 2020 တွင်စတင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ မက်ထရိုစီမံကိန်းသည် Mersin ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်မသင့်တော်ကြောင်း၊ မြို့၏စီးပွားရေးနှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏ဘတ်ဂျက်ကျဉ်းမြောင်းလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတအင်ဂျင်၊ Yerine ခရီးသွားလာရေးမြို့ Mersin တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပြီးစီးနိုင်သည့်မီးရထားလမ်းစနစ်ကြောင့်ခရီးသည်များသည်တောင်နှင့်ပင်လယ်ရှုခင်းများကိုခရီးသွားလာနိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemနာကိုရထားလမ်းနည်းစနစ်ဖြင့်အဆင့်ဆင့်၊ အချိန်တိုအတွင်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ဖြေရှင်းသင့်သည်။ Mersin Metropolitan Municipality သည်ပြင်ပငွေကြေးမလိုအပ်ဘဲဤစီမံကိန်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်။ မက်ထရိုစီမံကိန်းကအရေးမကြီးဘူး”
မြို့တော်ဝန် Hasan Engin ကပြောကြားရာတွင် Mersin သည်မီးရထားလမ်းမီးရထားလမ်းများနှင့်အိမ်နီးချင်း Adana ရှိမီးရထားလမ်းစနစ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းသည့်ရွေးချယ်မှုများကိုမှားယွင်းစွာရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ Mersin Metropolitan Municipality နှင့်အခြားသောဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများအနေဖြင့်မြန်ဆန်မြန်ဆန်သောဖြေရှင်းချက်များထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်မည်သူမျှမကိုင်တွယ်နိုင်သောမြေအောက်ရထားကိုလုပ်လျှင် Mersin သည်အစွန်းရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှအကျိုးရယူသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Adana ၌၎င်း, မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းကြောင့်၊ ဦး စားပေးမှုများသည်လိုချင်သောအကျိုးစီးပွားကိုမမြင်ခဲ့ပါ။ Adana သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်နယ်များအတွက်ဥပမာကိုကြည့်သောအခါ, လူများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရှုခင်းများအတွက်ရထားလမ်းပိုမိုလွယ်ကူသည်။ မြေအောက်မသွားဘဲပင်လယ်နဲ့တောင်တွေကိုမကြည့်ဘဲပင်လယ်ထဲကိုကီလိုမီတာတစ်ခေါက်သွားရတာဟာအလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ”
Harbour-Hal Interchange အကြောင်းပြောရာတွင်သမ္မတအင်ဂျင်က Hal Junction သည်ဆိပ်ကမ်းဝင်ပေါက် - ထွက်ပေါက်အသွားအလာကြောင့်လုံလောက်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်အောက်ပါဖော်ပြချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည် -“ Mersin Port management; ဝင်ပေါက် - ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများအရေးတကြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်intoရိယာသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ လမ်းလျှောက်သူနှင့်ဆိပ်ကမ်းနံရံများမှ ဖြတ်၍ မသွားသောလူကူးလမ်းဘေးများသည်လမ်းချဲ့ထွင်မှုအချို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဆိပ်ကမ်းသို့သွားသောလမ်းကြောင်းကိုအဆက်မပြတ်နှောင့်ယှက်နေသည်။ Hal လမ်းဆုံပြတ်သွားပြီးယာဉ်အသွားအလာပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ တနည်းကား, တူညီတဲ့မငြိမ်မသက်ဆက်လက်။ အကယ်၍ Mersin Port သည်ဤပုံသေနည်းကိုမအကောင်အထည်ဖော်ပါက၎င်းအတွက် traffic အတွက်အဖြေမရှိပါ။ Functional state junction သည်ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်၊ junction အနေဖြင့်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
လူနေareasရိယာများမှလုပ်ငန်းခွင်နှင့်စက်မှုဇုန်များသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသင့်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတအိန်ဂျင်ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ - OIZ မှမြို့တော်သို့ ၀ င်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်အရှေ့ဝင်ပေါက်တွင်အနည်းဆုံး 45 မိနစ်ပိုင်းအသွားအလာပြတ်တောက်မှုရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုလမ်းအပြင်ဘက်တွင်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိ၊2။ 18 ဇုန်သတ်မှတ်ခြင်းလျှောက်လွှာကိုစက်မှုဇုန်လမ်းမှတာရှုစ်ဖွဲ့စည်းထားသောစက်မှုဇုန်သို့အမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်သင့်သည်။ ဤလမ်းပြီးပါကအရှေ့ဘက်မှ Mersin သို့ဝင်သောတစ်ခုတည်းသောDeliçayသို့အခြားဝင်ပေါက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ဒီမှာပြင်းထန်မှုကျဆင်းလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မီးရထားလမ်းစနစ်အားစက်မှုဇုန်များသို့ဤလမ်းမှမြို့ပြအသွားအလာအတွက်တိုးချဲ့ရန်အရေးကြီးသည်”
အဲဒီအစားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ Gaziantep မှမြေအောက်လမ်းရထားပြုရပါမည် 29 / 01 / 2014 Gaziantep လမ်းရထားအစားမြေအောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပြုရပါမည်: ဗိသုကာအာရုံစိုက်မှု၏ Gaziantep ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရှေ့ဆက်အဓိကအားဖြင့်အသွားအလာနှင့်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ဗိသုကာဥက္ကဋ္ဌSıtkıSeveroğlu၏ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများçekti.gaziantepကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏မြို့များ၏ပြဿနာ, မွို့၌ကြုံတွေ့ပြဿနာတွေနဲ့ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ကိုပြင်ဆင်အစီရင်ခံစာများအပါအဝင်၎င်း၏မြို့တော်ဝန်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ Severoğluဒေသခံမန်နေဂျာမှတမြို့လုံး၏ '' ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း '' ပြဿနာတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးအခြားနည်းလမ်း transmit ကြောင်းဖော်ပြထားနှင့်အတူသမ္မတကပြင်ဆင်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ SıtkıSeveroğluဗိသုကာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ, ရှေ့ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်ကြေငြာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Severoğluမြို့တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာအာရုံကိုဒေသခံမတ်လထဲမှာကျင်းပမည့် "အသွားအလာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲငင် ...
ပြုရမည်ဟု Manisa အလင်းရထားလမ်းစနစ်က 12 / 07 / 2012 ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကေဘယ်လ်ကားများ၏ဂျာနယ်လစ်Türekတုံ့ပြန်အတွက် OSB များ၏အလှူငွေပေးနိုင်ကြောင်း, "ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးအလွန်ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားထိုကဲ့သို့သောယဉ်ကျေးမှုစင်တာများအဖြစ်ကိစ္စများ, မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ကိစ္စရပ်များကို၏အစီအစဉ်အပေါ်တစ်ဦးဘာသာရပ်။ ကျနော်တို့ကြီးမြတ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသူ့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်, အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားရွေ့လျားအကြောင်းကိုအနီးကပ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်။ မျှော်လင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာအပေါ် Cengiz Bey မြေပြင်ကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်, ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်, အ Manisa ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံများအကြားဘတ်စ်ကား-မီနီဘတ်စ်ယာဉ်ကြော၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုဖျက်ဆီးများအတွက်အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ " မလွှဲမရှောင်အဖြစ်မှန် Manisa အတူ OSB အတွက်အလင်းရထားလမ်းအလင်းရထားလမ်းစနစ်က ...
Sakarya အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်း Downtown ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ အလင်းကိုရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများနှင့်ပဏာမအလုပ်၏အမဲလိုက်ဇာတ်စင်sürdürülüyo 28 / 03 / 2013 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သမ္မတ, Arcade ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဇာတ်စင် Sakarya အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်ပဏာမဒီဇိုင်းအလုပ်လိုင်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ပြီးစီးပြီးနောက်တစ်နှစ် 2013 ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏မှတပါးအရာရှိများဒုတိယတစ်ဝက်တွင်မိတ်ဆက်မည်အကြောင်းတည်း။ ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 ကီလိုမီတာလိုင်းလမ်းကြောင်းအရှည်ကြောင်းလူသိများသည် ကုမ္ပဏီကပြင်ဆင်မြူနီစီပယ်ကိုအပ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်း Sakarya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို၌တည်လိမ့်မည်စနစ်ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
အဲဒီအစားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ Gaziantep မှမြေအောက်လမ်းရထားပြုရပါမည်
ပြုရမည်ဟု Manisa အလင်းရထားလမ်းစနစ်က
Sanliurfa အလင်းရထားစနစ်ကအစားလာမယ့် Metrobus
အကြံပြုထားမယ့်အစား Trambus အလင်းရထားစနစ်
Malatya, Elazig ရထားစနစ်အဖြစ်ပြုရပါမည်